ခုံစက် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး ခုံစက် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကျော်ကြားသောအမည်များတစ်ခုဖြစ်တယ် Taiwan ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူတစ်ဦးပြည့်စုံသည့်အကွာအဝေး ခုံစက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှရယူဖို့သောဤအသုံးချဖို့တန်းမြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့်ဖောက်သည် '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gradations နှင့်အတူထိုထုတ်ကုန်ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှလိုက်နာရန် - ချိုးဖျက်, အမြဲတစေ, ထူးမြတ်သော၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီကာလအတွင်းတွင်ကမ္ဘာတဝှမ်းအသစ် clients များနှင့်အတူအောင်မြင်သောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုဖွဲ့စည်းရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
ပုံစံ - MT-108A
MT-၁၀၈ မျိုးသည်ဖောက်သည်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသော controller ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်’စက်ရုပ်နှင့်အလိုအလျောက်တံခါးကိုအလိုအလျောက်တင်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းစနစ်သို့ရောက်ရှိရန်နှင့်လူအင်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေပြီးစက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်.
ဘက်ပေါင်းစုံအိပ်ရာသည်အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းအားကို ၅ အထိအထိထောက်ပံ့သည်.၂ မီတာနှင့်အမြင့်ဆုံးလှည့်ခြင်းအချင်းသည် ၇၀၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်.
30 နှင့်အတူအစိုင်အခဲအိပ်ရာ̊inclination ဒီဇိုင်းသည်တုန်ခါမှုမရှိကြောင်းသေချာစေသည်.
C နှင့်ကိုက်ညီသောအခါ၎င်းကို angular positioning အစားစဉ်ဆက်မပြတ်တည်နေရာအတွက်သုံးနိုင်သည်-ဝင်ရိုး.
မက်စ်.လှည့်ခြင်း Dia.:၃၈၀ မီလီမီတာ
Chuck အရွယ်အစား:၈ လက်မ
Tube Dia ကိုဆွဲပါ.: Ø၅၂ မီလီမီတာ
Spindle Speed Range:4500 rpm ပါ
ဗိုင်းလိပ်တံ Hole Dia မှတဆင့်.: Ø62 မီလီမီတာ
Front Bearing Dia သည်.: Ø100 မီလီမီတာ
X Axis ခရီးသွား:၂၁၀ မီလီမီတာ
Z Axis ခရီးသွား:၂၅၀ မီလီမီတာ
မဟုတ်ဘူး.Tool station မှ:10T
Standard Accessories များ:
3 မေးရိုးဟိုက်ဒရောလစ် Chuck:Hard claw ၁ စုံ
ဟိုက်ဒရောလစ်အမြီး:နူးညံ့သောလက်သည်း ၁၀ စုံ
အအေးပေးစနစ်:Chuck ညှပ်များအတွက် Foot switch သည်
ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်3လခန့်
အာမခံချက်:ယန္တရားအတွက် ၁ နှစ်အာမခံ,ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမခံချန်လှပ်ထားသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/lathe-machine.html
အကောင်းဆုံး ခုံစက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ခုံစက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
CNC စက်ဂိုဏ်း-type ကို tool ကိုကိုင်ဆောင်သူစနစ်ကမြင့်မားသည်-တိကျမှုနှင့်လျင်မြန်သော tool ကိုနေရာချထားခြင်းပြောင်းလဲခြင်း,tool ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီးထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်. စီစဉ်ထားပါဝါ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူစနစ်(ဝင်ရိုး/အချင်းဝက်မျဉ်း)machining အတွက်,တူး,tapping နှင့်အခြား machining စွမ်းရည်များ. ထူးခြားချက်: 30̊ရှိုကုန်းနှီးဒီဇိုင်း,အပြောင်းအလဲနဲ့၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ချစ်ပ်ဖယ်ရှားရေး၏အဆင်ပြေသည်. FANUC ကိုလက်ခံပါβစီးရီးဗိုင်းလိပ်တံမော်တာနှင့် servo မော်တာ. သတ်မှတ်ချက်: ကုတင်ပေါ်လွှဲလိုက်သည်:420 မီလီမီတာ လက်ဝါးကပ်တိုင်လျှောကျော်လွှဲ:350 မီလီမီတာ မက်စ်.လှည့်ခြင်း Dia.:320 မီလီမီတာ မက်စ်.အရှည်လှည့်:၄၈၀ မီလီမီတာ Chuck အရွယ်အစား:၈ လက်မ Spindle drive မော်တာ:၁၁/၁၅ kw Spindle Speed Range:4500 rpm ပါ မဟုတ်ဘူး.Tool Station မှ:10T လမ်းညွှန်ချက်များ:တစ်ပြေးညီ စက်အလေးချိန်(N.W.):ကီလို ၃၃၅၀ X/Z ၀ င်ရိုးရထားလမ်းဒီဇိုင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကိုသက်သာစေပြီးကုန်ပစ္စည်းတိကျမှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည်. Standard Accessories များ:3မေးရိုးဟိုက်ဒရောလစ် Chuck:Hard claw ၁ စုံ ဟိုက်ဒရောလစ်အမြီး:နူးညံ့သောလက်သည်း ၁၀ စုံ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်:စင်တာမှာနေတာလား အအေးပေးစနစ်:Chuck ညှပ်များအတွက် Foot switch သည် အလိုအလျောက်ချောဆီစနစ်:MPG လက်ဘီး အလုပ်လုပ်ရန်အလင်းပေးရတယ်:Tool box အပူထုတ်စက်:Morse ကကျဉ်းလက် ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ&အင်္ကျီလက်များသည်သက်ရှိပစ္စည်းအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်.※ ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်3လခန့်အာမခံချက်:ယန္တရားအတွက် ၁ နှစ်အာမခံ,ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမခံချန်လှပ်ထားသည်.ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
CNC Flat အိပ်ခုံ
CNC Flat အိပ်ခုံထူးခြားချက်: အောက်ခြေဖွဲ့စည်းပုံသည်တစ်ခုဖြစ်သည်-အပိုင်းအစပုံသွင်းဒီဇိုင်း,မြင့်မားသောခွန်အား,မြင့်မားသော shock shock နှင့်ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်. ရိုးရာခုံများနှင့်ကွန်ပျူတာခုံ၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်,ကြီးမားပြီးရှည်သော workpieces များကိုပြုပြင်ရန်သင့်တော်သည်. ခွဲထားသောရေစည်နှင့်ရွေ့လျားနိုင်သော chip များစုဆောင်းထားသော groove သည်ဖြတ်တောက်ထားသောရေနှင့်သံဖိုင်များသန့်ရှင်းရေးကိုလွယ်ကူစေသည်,ပြီးတော့နေရာလွတ်လည်းသက်သာတယ်. သတ်မှတ်ချက်: ကုတင်ပေါ်လွှဲလိုက်သည်:၄၆၀ မီလီမီတာ လက်ဝါးကပ်တိုင်လျှောကျော်လွှဲ:258 မီလီမီတာ စင်တာအမြင့်:၂၂၅ မီလီမီတာ dis.စင်တာကြား:၉၃၀ မီလီမီတာ Spindle Drive Motor ဖြစ်သည်:၉ kw Spindle Speed Range:၂၇၅-၂၀၀၀ rpm Spindle နှာခေါင်း:D1-6 စက်အလေးချိန်(N.W.):1850 ကီလိုဂရမ် Standard Accessories များ: သုံး-မေးရိုးသာမန် Chuck လျှပ်စစ်လက်ဘီး လက်စွဲစတုရန်းကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ မိုဘိုင်းချစ်ပ်ပုလွေ လက်စွဲစာအုပ်အမြီး ရွှေ့ပြောင်းသွားလာလှုပ်ရှားမှု အအေးစနစ် အတွင်းအချင်းကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ*2 အလိုအလျောက်ချောဆီစနစ် အလုပ်လုပ်မီးအိမ် ပျင်းစရာစွပ်*၂ စုံ ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်3လခန့်အာမခံချက်:ယန္တရားအတွက် ၁ နှစ်အာမခံ,ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမခံချန်လှပ်ထားသည်.ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်